Otu esi achọta Fonts na Adobe Capture | Martech Zone
Ọ bụrụ na ịnwetụla ọrụ na ọrụ ebe onye ahịa ahụ chọrọ ụfọdụ eserese ọhụụ ma ọ bụ nkwekọrịta, mana amaghị ụdị mkpụrụ edemede ha na - eji - ọ nwere ike ịba mma. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya na a font na ị hụrụ na ụwa na-achọ iji ya… jisie na figuring ya.
Nzukọ Akara Aha
Laa azụ n'ụbọchị ... dị ka afọ iri gara aga, ị kwesịrị bulite ihe onyonyo gaa otu nnọkọ ebe font addicts ga-amata font. Ndị a dị ịtụnanya. Oge ụfọdụ m na-ebugo foto ma nwee azaghachi na nkeji oge. Ọ bụ nzuzu - na-ezi ezi mgbe niile!
E nwere ihe fọrọ nke nta Njirimara 30 nke ide ihe ederede, ya mere na iji otutu iri puku ederede ndi ozo - imata nuances nke font nwere ike isiri gi ike. Daalụ ịdị mma maka Intanet na ike mgbakọ, n'agbanyeghị.
Anyị nwere ngwaọrụ dị iche iche nke na-eji OCR (njirimara njirimara anya) were font ma jiri ya tụnyere ọdụ data amaara nke ederede na weebụ. E nwere ụfọdụ ọrụ ndị a:
Ihe Font Bụ
Kedu ihe |
Ọ bụrụ na ị bụ Adobe Creative Cloud onye ọrụ, Adobe nwere atụmatụ dị ịtụnanya n’ime ya Adobe eweghara ngwa na-etinye font njirimara (ma ọ bụ yiri font nhọrọ) iji ngwa igwe na Amamịghe echiche (AI) n'ọbụ aka gị site na ekwentị mkpanaaka gị. A na-akpọ ya Pịnye Capture.
Adobe Capture na-enyere gị aka iji ekwentị mkpanaaka gị dị ka a onye ntụgharị vector iji gbanwee foto n'ime isiokwu agba, usoro, ụdị, ihe, brushes, na ọdịdị. Weta akụ ndị ahụ na desktọpụ ọkacha mmasị gị yana ngwa ekwentị - gụnyere Adobe Photoshop, Illustrator, Dimension, XD, na Photoshop Sketch - ka ijiri rụọ ọrụ okike gị niile.
Iji jiri Cadị Capture, were nnọọ foto nke font na Capture na-eji Tekinoloji Adobe Sensei ịmata ụdị ndị ahụ ma tụọ mkpụrụ edemede ndị yiri ya. Zọpụta ha dị ka ụdị agwa iji jiri Photoshop, InDesign, Illustrator, ma ọ bụ XD.
Adobe Capture na-enye ụfọdụ atụmatụ ndị ọzọ dị oke egwu yana njirimara njirimara:
Materials - N'ịwapụta ihe PBR dị mma na textures site na onyonyo ọ bụla na ngwaọrụ mkpanaka gị, ma tinye ha na ihe 3D gị na Dimension.
Nchacha - Mepụta brushes ọdịnala dị elu n'ọtụtụ ụdị, wee jiri ha tee Animate, Dreamweaver, Photoshop, ma ọ bụ Photoshop Sketch.
ihe nakawa etu esi - Mee usoro iheomume dị na oge site na iji setịpụ ihe osise, wee zipụ usoro gị na Photoshop ma ọ bụ Onye na-ese ihe iji dozie ma jiri ya mejupụta.
akpụzi - Site na esere aka esere na foto dị iche-iche, ị nwere ike ịtụgharị onyonyo ọ bụla ka ọ bụrụ ụdị vector dị ọcha iji jiri ọtụtụ ngwa okike Creative Cloud.
agba - Wegharia ma dezie isiokwu agba ma gbanwee ha ka ọ bụrụ palettes nwere ike iji rụọ ọrụ ọ bụla gbasara Cloud Cloud ngwa ọ bụla.
Budata Adobe Capture maka iOS Budata Adobe Capture maka gam akporo
Tags: jide adobeemefont nzukọfont osaesi amata fontmata fontederedeonye ntụgharị vectorkedu font bụ nke a